Warshadda bacda maydha ee Shiinaha ee la taaban karo iyo alaableyda | BAOTE
Bacaha wasakhda ah ee bamka la taaban karo ayaa ku habboon labada bambooyin iyo bambooyin. Cabirka caadiga ah waa 175 * 104 * 37cm, 182 * 107 * 41cm, 110 * 110 * 49cm, 107 * 107 * 110cm, 51 * 49 * 51cm. (20 "* 20" * 19 ", 43" * 43 "* 19", 42 "* 72" * 16 ", 42" * 42 "* 43".) Waqtigan xaadirka ah waxaan inta badan soo saarnaa nooca Australia, nooca Mareykanka, Kanadiyaan nooca bacda lagu dhaqo bamka la taaban karo, bac isku dhafan oo diyaar ah, Bacda guud ee ka saarista qashinka, bacda dharka lagu dhaqo ee safka ku jira.
Waa maxay qashinka wasakhda wasakhda ah? Dhammaan goobaha dhismaha, bixiyeyaasha la taaban karo waxaa looga baahan yahay inay maydhaan godadkooda ama bambooyinkooda ka hor inta aysan ka bixin goobta. Qashinka wasakhda ah wuxuu noqdaa mid adag wuxuuna noqdaa dhibaato deegaanka ah iyo dhib ku ah shaqaalaha inay nadiifiyaan.
Kooxda BAOTE waxay OEM u adeegsan karaan macaamiisha noocyo badan oo Shandado Wasakh ah. Dambiisha Bakeeriga ah ee Shamiitada ah waxay bixisaa xal deg deg ah oo ku habboon oo ay ku jiraan dhammaan qashinka wasakhda la taaban karo. Boorsada waxaa si fudud loogu ridayaa hoosteeda ama buushashka waxaana sibidhka ku jira shaashadda hoose ee caag / polyetylen.
Marka shamiitada la dhigo, boorsada waa la shidi karaa iyadoo lagu dhisay wareegyo si loogu badbaado oo si fudud loogu raro goobta aagga. Dhammaan boorsooyinka si buuxda ayaa loo tijaabiyaa waxayna leeyihiin culeysyo shaqo oo ammaan ah oo hoos ku taxan.
Marka la dejiyo, ka Bacda Wasakhda la taaban karoiyo waxyaabaha ku jira waxay abuurayaan badeecad labaad oo isle'eg oo loo isticmaalo darbiyada baarkinka baabuurta, darbiyada xajmiga hooseeya ama xeryahooda loogu talagalay. Boorsooyinka ayaa ku habboon in loo isticmaalo codsiyada sida Dhismaha Rayidka, Dhismaha Wadooyinka & Dhismaha Ganacsiga
Boorsooyinkan waxaa loo geyn doonaa goobta iyada oo qandaraasluhu mas'uul ka yahay xoqidda & meeleynta & ka saarista.
Maxaad ula shaqeysaa BAOTE TEAM si loo soo saaro Bacaha Wasakhda la taaban karo? KOOXDA BAOTE waxay leeyihiin 4 sano oo khibrad ah wax soo saarka bacda maydhashada la taaban karo. Waxaan ku siin karnaa tayo sare leh qiimo tartan macaamiisha ah. Waxaan sidoo kale siin karnaa adeeg aad u wanaagsan kadib iibka macaamiisha. Ku soo dhawow shirkadda naga saarida qashinka nala soo xiriir nala soo xiriir, waxaan ku siineynaa faahfaahinta bacaha waxaanan ku siin doonaa dalab wanaagsan!
Bacda Dharka lagu maydho
Dambiisha Wasakhda la taaban karo
Bacda Bedelka Dhismaha
Furan Boorsada Dharka
Gawaarida Gawaarida, Qaab dhismeedka, U Bolts, Hex handarraabbadeedii, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Lag Bolts,